IiNkonzo ze-intanethi - Iicawa zikaKristu ziyakwamkela
Iicawa ZikaKristu Ziyakwamkela
Iicawa zikaKristu e-United States
Iicawa ZikaKristu Ehlabathini Lonke
Iicawa ZikaKristu Kwi-Intanethi
Bhalisa iProfayili entsha yeCawa
Ukuhlaziya iProfayili yeSonto
IYunivesithi yaseMichigan - Abafundi bakaKristu
IYunivesithi yase-Texas A & M - Aggies KuKristu
Ukukhangela iNdlela yeNkosi
Network Network Broadcasting Network
Sifundo se Bha yibhile
Ifowuni yeTestamente eNtsha yamaTestamente
JM Bible Inceda
School Bible School
Iincwadi kunye neeVidi
I-Store Hill Book Book
I-E-Bible Class Class
Inethiwekhi yoLwazi oluPhezulu
Imibutho yeeNtlekele zeNtlekele
Iicawa zeQela loKuphendula iNtlekele kaKristu
Iicawa zikaKristu zentlekele yokunceda Inc
Inkonzo yoNcedo lweNtlekele
Iintshumayelo ngabanye abaVangeli
Siyila iiWebhsayithi zeeCawa
UkuCwangciswa kweWebhusayithi nokuHamba
Ifowuni yeCandelo leNkxaso
Ngena kwiNgxelo Yakho yeNgxelo yeCawa
"Nibingelelane ngokubamba okungcwele. Iicawa zikaKristu ziyanibulisa."- AmaRoma 16: 16
Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu. Ukutyelela kwakho apha kuyanconywa kakhulu, kwaye sithandazela ukuba ufuna ukusivakashela kumntu njengoko sikhonza uNdikhoyo uThixo uSomandla ndawonye njengentsapho enye.
Kule webhusayithi ungafunda ngokubanzi malunga necawa zikaKristu. Ungasayina iikhosi zeencwadi zeBhayibhile, okanye ungaqhagamshelana nathi malunga nayiphi na imibuzo onokuyenza malunga neBhayibhile.
Icawa kaKristu yintsapho yabantwana bakaThixo abasindiswa ngobabalo lukaThixo kwaye bazinikele ekukhonzeni iNkosi yethu kunye nabanye abantu. Kukho amabandla amaninzi amabandla kaKristu ngehlabathi. Kwicawa yeNkosi uya kufumana abantu bezobudala kunye nokuhamba ezininzi zobomi abaye babizwa ukuba babelane ngokubambisana nothando nokwamkelwa. Siyavuya kwizipho ezixabisekileyo iNkosi esiyinike yona, kwaye sizimisele ukuxelela abanye ngezipho kunye nezibusiso. Nceda uyazi ukuba kukho indawo ekhethekileyo kuwe nentsapho yakho phakathi kweecawa zikaKristu.
Ukuba awukwazi ukubona amajelo angentla apha: khupha apha: MP4
Ngubani iicawa zikaKristu?
Sisiphi isikhalazo esicacileyo secawa likaKristu?
Ingemvelaphi yomlando woMlambo Wokubuyisela
Zingaphi iicawa zikaKristu zilapho?
Ziziphi iicawa ezidibeneyo ngokubambisana?
Ziziphi iicawa zikaKristu?
Icawa kaKristu ikholelwa ntoni ngeBhayibhile?
Ngaba amalungu ebandla likaKristu akholelwa ekuzalweni kwentombi?
Ngaba icawa kaKristu ikholelwa ekumiselwe ngaphambili?
Kutheni icawa likaKristu ibhaptiza kuphela ngokucwiliswa?
Ngaba ubhaptizo lwasemantwaneni lwenziwa?
Ngaba abalungiseleli becawa bakuva ukuvuma?
Ngaba imithandazo iya kubangcwele?
Kudla kaninzi kangakanani isidlo seNkosi?
Luhlobo luni lomculo elisetyenziselwa unqulo?
Ngaba ibandla likaKristu likholelwa ezulwini nasegodini?
Ngaba icawa likaKristu ikholelwa kwiplatoliyori?
Ngayiphi indlela icawa ikhuselekile ngenkxaso yemali?
Ngaba icawa likaKristu inokholo?
Uba njani ilungu lecawa likaKristu?
I-Spearman, eTexas 79081
Uncedo: Indlela yokuhlaziya iProfayili yeCawa ekhoyo
Uncedo: Indlela yokudala iProfayili entsha yeCawa
Solar Mission ePhilippines
Copyright © 1995 - 2020 Internet Ministries. Ubulungiseleli beecawa zikaKristu. Onke amalungelo agciniwe.
Ngqina Idilesi Yemeyile *
Ngqina iphasiwedi *
Ikhowudi yokhuseleko; *
Fields ziphawulwe uphawu lenkwenkwezi (*) ezifunekayo.